Home Wararka Beesha caalamka oo war ka soo saartay dibadbaxyada ka socda Baydhabao (Akhriso)
Beesha caalamka oo war ka soo saartay dibadbaxyada ka socda Baydhabao (Akhriso)
Dalal badan oo ka mid deeq bixiyaasha iyo wadamada beesha caalamka aya war ka soo saaray dibadbaxyada iyo rabshadaha siyaasadeed ee ka socda magaalada Baydhabo, waxayna hoosta ka xariiqeen in ay aad uga xun yihiin dhimashada Shacabka iyo faragelinta lagu hayo doorashooyinka Koofur Galbeed.
Beesha caalamka aya ugu baaqday Dowladda MW. Farmaajo in ay faraha kala baxdo doorashada isla markaana tixgeliso maamulka Koofur Galbeed, Waxay qoraalkooda ku sheegeen in si degen loo raaco nidaamka doorashooyinka ay sameysteen maamulka si ay u dhacdo doorasho xalaal ah.
Warkan aya imanayo xilli ay oday dhaqameedka iyo siyaasiyiinta Koofur Galbeed ay ku baaqeen in dib loo dhigo doorashooyinka
Previous articleOdayaasha Dhaqanka K/Galbeed oo sheegay in ay is-taagayaan Doorashada Maamulkaasi!!
Next article(Deg Deg) Wadada aadda Hotelkii uu deganaa Gud .Mursal oo gebi ahaanba la xiray
Wasiir Khadiijo ma Qandho iska caadi ah ayaa haysa Misa waa...